Geomap kunye nekhonkco yayo neGoogle Maps - Geofumadas
Geomap kunye nekhonkco yayo neGoogle Maps
Ngo-Okthobha, 2011 Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Ngethuba elidlulileyo ndenza uhlolo lwalo beta ye Geomap, ukuba phakathi kweempawu zayo ezintle zinokukwazi ukuvumelanisa ukubukwa kwedatha kungekhona kwiGoogle Maps kuphela, kodwa kunye neBing Maps, Yahoo Maps kunye neMephu ye-Street Street.
Ngokungafaniyo nezinye iiprogram ezenzayo, ezithengisa kuphela ukuthunjwa kwe-georeferenced, i-Geomap inenkxaso yokulayisha iimephu ezifunyanisiweyo, iimpawu zobugcisa ezenziwe ngendlela yezitena ziye zazingiswa kwiindlela ezithile ukuze zigcinwe. Yiloo nto esiyibonayo xa sisondeza kwiGoogle Maps, ayifuni kunoma yiyiphi inzululwazi kodwa iya kufana neyayifaka kwi-mosaic kwaye yintoni eyenza ukuba ukuthunyelwa kusebenze ngokukhawuleza, kusebenze ngamandla kwaye sele Izixhobo ezibonakalayo ezivulekileyo ezibonakalayo njenge-Open Layers kunye neTile Caché.
Ngamhla bavakalisa ukongezwa okutsha okubizwa ngokuba nguMphathi weGeolocation, apho unokufumana khona idatha kwimephu, eboniswa kumbukeli weGoogle Maps ngendlela echanekileyo. Kuyathakazelisa ukuba oku kusebenza njengoko kwenzayo kwiGoolge Earth okanye iGoogle Maps, ukuba sibhala ixesha ukusuka kwendawo, kwaye sifumana amanqaku abuye ayenzeka ngokungathandabuzekiyo, njengoko sibona kumzekelo olandelayo
Isiqithi sase-El Hierro, kwi-cartography kaRhulumente weeCanary Islands.
Ndicinga ukuba i-Geomap kuya kufuneka ibukele rhoqo, ukuba imimiselo ekhompyutheni emitsha isetyenziswa ngabantu abasebenzisa iinkqubo ezifana ne-AutoCAD, Microstation ne-ArcMap. I-plugin enhle kakhulu, eyongeza kwiimvavanyo eziye zambamba ingqalelo kwi-Google Earth, njengokuba yenzayo PlexEarth nge-AutoCAD, Arc2Earth neArgGIS, KloiGoogle nge-Microstation, ArcGIS, Mapinfo kunye neGeomedia.
Kancinci ukusebenzisana neemephu ze-intanethi kuye kwaqhubela phambili kwinxalenye yeenkqubo, zombini ilayisenisi yangasese kunye neenkululeko. Kwaye nangona i-Google igcina ingxaki ngokumalunga nemigangatho ye-WMS okanye ukungabikho kwemethadatha kwiinjongo ezifuna ukuchaneka, kufuneka sihloniphe ukuthanda kwayo kwaye sinamathele kwinto enika ngayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Zoba polygon imiyalelo kunye nomgama ukusuka Excel ukuya Microstation
Post Next Imizuzu ye5 yokuzithemba kwiGoCivilOkulandelayo "